दुःखबाट मुक्ति पाउन, सन्तान लाभ हुन, पदोन्नति हुन, निरोगी हुन यो मन्दिरमा एकपटक दर्शन गर्न पुग्नु होला ! यहाँ हरेक मनोकामना पुरा हुन्छन् ! - Nepal Insider
Home/रोचक/दुःखबाट मुक्ति पाउन, सन्तान लाभ हुन, पदोन्नति हुन, निरोगी हुन यो मन्दिरमा एकपटक दर्शन गर्न पुग्नु होला ! यहाँ हरेक मनोकामना पुरा हुन्छन् !
धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल हलेसीको जीर्णोद्वार तीव्रगतिमा -धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल खोटाङको हलेसीमा जीर्णोद्वारको काम तीव्रगतिमा अगाडि बढाइएको छ । हिन्दू, बौद्ध र किरात धर्मालम्बीको सङ्गमस्थल हलेसीमा सङ्घीय सरकार र हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको संयुक्त रु ८२ लाखको लगानीमा जीर्णोद्वार थालिएको हो । धार्मिक मान्यताका साथै प्राकृतिक सौन्दर्यले पनि प्रसिद्ध हलेसीमा पुरानो संरचनामा असर नपुग्ने गरी जीर्णोद्वार शुरु गरिएको हलेसी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक समर भुजेलले बताउनुभयो । “चट्टानको बीच भागमा रहेको गुफाभित्र बिराजमान शिवलिङ्ग र पार्वतीको मन्दिर छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्राकृतिकरूपले बनेका कुनै पनि संरचनालाई नछोइ जीर्णोद्वारको काम शुरु गरिएको हो ।”